Fahasalamàna · Desambra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Fahasalamàna · Desambra, 2019
Tantara mikasika ny Fahasalamàna tamin'ny Desambra, 2019
Afrika Mainty 27 Desambra 2019
Azia Afovoany sy Kaokazy 17 Desambra 2019
Tsy mbola nisy tranganà Ebola voarakitra tao Azia Afovoany. Raha misoroka ny fihinanana akondro ny ao amin'ny firenena iray ao amin'ny faritra, ny mpahay siansa ao amin'ny iray hafa kosa mikaroka vaksiny.
Azia Atsimo 16 Desambra 2019
Namarana ny fifadian-kaniny mandra-maty(fast-unto-death) faha-efatra tamin'ny 15 Febroary 2014 i Dr. Govinda KC, mpandidy taolana ela nihetezana ao amin'ny Hôpitaly OniversiteraTribhuvan ao Nepal izay voapetaka anaram-bositra Crusader KC. Dr. Govinda KC.
Azia Atsimo 13 Desambra 2019
Mozambika: Fanaovana ho ara-dalàna ny fanalan-jaza ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana vaovao
Mozambika 09 Desambra 2019
Mozambika no firenena Afrikana fahefatra nampihatra ny fanesorana tsy ho heloka ny fanapahana vohoka an-tsitrapo (IVG).
Raràn'ny filohan'i Gambia ny ‘fanombinana ny taovam-pananahan'ny vehivavy, saingy mbola be ny asa miandry
Afrika Mainty 07 Desambra 2019
Adino tao anatin'ireny fiarahabàna ireny (...), ny zavamisy hoe tsy voaràra ao Gambia ny FGM, na farafaharatsiny, tsy mbola izay aloha no tena izy